ဆားအိတ်များ ဆားအိတ်များ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
PP ယက်ထည်များကိုတာပေါ်လင်၊ မြေပြင်အဖုံးများသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးသည့်အိတ်အမျိုးမျိုးကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောအသုံးချပစ္စည်းများတွင်အခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မားထောက်ပံ့ ဆားအိတ်များ ကြောင်းအစိုဓာတ်ကိုဆန့်ကျင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခုခံရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိတ်များသည်သင်ရွေးချယ်လိုသောအရောင်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်းတို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုစက်ရုံများမှထုတ်လုပ်သည် Taiwan.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်ပြီး ၀ န်ထမ်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။ PP နှင့် PE ယက်ထည်ပစ္စည်းများကိုသင်၏ပုံမှန်ထောက်ပံ့သူဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
PP အပါအ ၀ င်ထည်သိုလှောင်သည့်အိတ်များအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်
သင့်တော်တဲ့ထုပ်ပိုးမှုဖြေရှင်းနည်းကိုခင်ဗျားကိုကူညီပေးပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
ပုံစံ - F-SERIES-04
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်:၁၀၅ ဂ&ကျော်သူ;အိတ်နှုန်း 5g
ဘုံအသုံးပြုမှု:စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရွယ်အစားရှိသောဆားအိတ်များသည်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အစားအစာအဆင့်ဆားများပါ ၀ င်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သောစက်မှုအစွမ်းသတ္တိ PP အိတ်များနှင့်အခြားအိတ်များထုတ်လုပ်ရန်အထူးပြုသည်/PE ထုတ်ကုန်များ.မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့် PP ၏ထောက်ပံ့မှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင့်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်/PE ပစ္စည်းများ.ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီထုတ်ကုန်များ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/salt-bags.html
အကောင်းဆုံး ဆားအိတ်များ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ဆားအိတ်များ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ